Aung San Suu Kyi : The Choice | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Aung San Suu Kyi : The Choice
Aung San Suu Kyi : The Choice
Posted by ကထူးဆန္း on Mar 17, 2013 in Copy/Paste | 14 comments
credit to : Spring Flowers , http://www.facebook.com/spring.flowers.14
Aung San Suu Kyi : The Choice ဆိုတဲ့ documentary ကို ကိုဗညား Ba Nyar က စာတန်းထိုးလို့ ပြီးသွားပါပြီ ။ တကယ်တော့ ဘာသာပြန်ပြီး သူ့ကို ပေးထားတာ အတော်ကြာပြီ …..သူလည်း အလုပ်တွေပိနေတာနဲ့ ပေါ်မလာပေါ်မလာ…. ကြာတော့ မေ့တေ့တေ့တောင် ဖြစ်နေပြီ ။ ဒီနေ့မှ ဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့် ပြီးပြီလို့ သိလိုက်ရတော့ အတော်လေး ဝမ်းသာသွားမိပါတယ် ။ မအားတဲ့ ကြားက သတိတရ စာတမ်းထိုးပေးတာကို အလွန်တရာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။ အရင်က ဒေါ်စုရဲ့ Rule of Law ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြောသွားတဲ့ ယေးလ်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်းရယ် ၊ CNN မှ ဒေါ်စု အင်တာဗျူးတွေကိုလည်း သူကဘဲ လိုလိုလားလား မြန်မာ စာတန်းထိုးပေးခဲ့တာပါ ။
အခု ဒီ The Choice ကို ပြန်ကြည့်မိတော့ ဘာသာပြန်နေစဉ်တုန်းက အထပ်ထပ် ကြည့်ထားပေမယ့် အသစ်ဖြစ်ရပြန်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည် ခေတ်သစ်သမိုင်းက ပုံရိပ်ပေါင်းများစွာနဲ့ အတူ ဒေါ်စုရဲ့ အောက်စ်ဖို့ဒ်က မိသားစုဘဝလေးကိုလည်း လွမ်းမောစဖွယ်တွေ့ရတယ် ။ သူတို့မိသားစု သူငယ်ချင်းတချို့ရဲ့ ပြောပြချက်တွေကလည်း အလှည့်အပြောင်း ပြင်းထန်တဲ့ သူတို့ ဘဝများကို ပီပြင်စွာ နားလည်စေပါတယ် ။မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ကြည့်ချင်ရင် link က ဒီမှာပါ ။
အမြည်းအနေနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲ ပါဝင်သူတွေ ပြောတဲ့ စကားအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
( ဒေါ်စု ) ။ ။ ကျမ မိသားစုနဲ့ အတူမနေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့ ။ သားတွေနဲ့ နေချင်ခဲ့တာပေါ့ ။ မိသားစုဆိုတာ အတူတူနေဖို့ဘဲဟာ ။ အဲဒီအတွက် ကျမမှာ ပုဂိုလ်ရေးအရ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှုတွေတော့ ရှိတာပေါ့လေ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မိသားစုနဲ့ အတူ နေရင်း သားလေးတွေ ကြီးပြင်းလာတာကို ကိုယ်တိုင် မြင်ခွင့်ရချင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နေဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောင်တ ၊ သံသယဆိုတာတွေ
တော့ ကျမမှာ မရှိပါဘူး ။
( မိုက်ကယ်အဲရစ်စ် ) ။ ။ ကျနော်တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အနာဂတ်ကို သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ( ၂ဝ ) ကျော်က ကျနော်တို့ မင်္ဂလာရက် မတိုင်ခင်တစ်နေ့ကတည်းက ကြိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ် ။ ပြောတာမှ ရုတ်တရက်တွေးမိလို့ခန့်မှန်းပြောတဲ့ပုံမျိုး မဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကို သေသေချာချာ သိနေတဲ့ အသိမျိုးနဲ့ ပြောခဲ့တာပါ ။ သူဟာ တနေ့တော့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို အလုပ်အကျွေးပြုရမယ် တဲ့ ။
( ဒေါ်စု ) ။ ။ ကျမတိုင်းပြည်ဟာ ကျမအတွက် အရမ်းကို အရေးပါတယ်ဆိုတာ အစကတည်းက သူ့ကို သေချာသိစေချင်ခဲ့တာပါ ။ မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်လာလို့ ကျမ သွားပြန်နေဖို့လိုလာရင် ကျမနဲ့ ကျမတိုင်းပြည်ကြားမှာ သူဝင်ပြီး တားမြစ်ပိတ်ပင်တာမျိုး မလုပ်ရဘူးလို့ ကျမ သေချာပြောခဲ့တယ် ။
( ဟီလာရီကလင်တန် ) ။ ။ ဒေါ်စုဟာ ဘေးကနေထိုင်ပြီး သက်သက်မဲ့ တရားဟောချင်နေတဲ့လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ။ တိုင်းပြည်မှာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် ကူညီချင်တယ် ။ ရေရှည်ခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးချင်တယ် ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင် အလုပ်ကို ရေကုန်ရေခန်း ကြိုးစားလုပ်ရမှာဘဲ ၊ နေရာအတွက် ဝင်ပြိုင်တာမျိုးတွေ လုပ်ရမှာဘဲ ။ ပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက် ရှုပ်ထွေးလှတဲ့လွှတ်တော်အလုပ်ကို လုပ်ရတာမျိုးတွေ ရှိမှာဘဲ ။ ဒီလို လုပ်တဲ့နေရာမှာ အရင်က ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရတာမျိုး ရှိလာမှာဘဲ ။ ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့လူတွေတွင်ဘယ်ဟုတ်မလဲ ၊ လူသတ်သမားဖြစ်ခဲ့သူတွေနဲ့လည်း သိသိကြီးနဲ့ တွဲလုပ်ရတာမျိုးတွေ ကြုံရမှာပါဘဲ ။
( Peter Caray မိုက်ကယ့်သူငယ်ချင်း ) ။ ။ သူတို့က NLD ပါတီကို ရုံးခွဲတွေ ဖွင့်ဖို့နဲ့ ဒေါ်စုကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြတယ် ။ ဒီတော့ အခု သူမဟာ လွတ်လပ်နေပြီပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ရက်စက်မှုရဲ့ အကျိုးဆက်အမွေ ၊ ထောင်ကျသွားရသူများရဲ့ အကျိုးဆက်အမွေ ၊ အသက်ပေးလိုက်ရသူများရဲ့ အကျိုးဆက်အမွေ ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေနဲ့ အများစုဖြစ်တဲ့ဗမာတွေကြားထဲက ဆက်ဆံရေးအကျိုးဆက်အမွေ ……ဒါတွေအားလုံးဟာ ခါးသီးမုန်းတီးဖွယ်အဆိပ်တွေလိုပါဘဲ ။ ဆိုလိုတာက ” လက်လွှဲဝင်ယူဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ အကျိုးဆက်အမွေတွေ ” ပါ ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကြည့်ရင် မပြီးသေးတဲ့ အလုပ်တွေက တောင်ပုံယာပုံပါဘဲ ။ အဲဒီလုပ်ဖို့ကျန်နေတဲ့ အလုပ်တွေရဲ့ အဓိကအခရာနေရာမှာ မြန်မာပြည်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်း ရှိနေပြန်တယ် ။
(ကင်မ်) ။ ။ အဖေက ပညာတတ်တစ်ယောက်ပါ ။ ဒါပေမယ့် ရယ်စရာဘာညာ ပြောလေ့ရှိတဲ့သူတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ဘူတန်မှာ (၅) နှစ်လောက်နေပြီး ဘုရင့်မိသားစုကို စာသင်ပေးခဲ့ဖူးတော့ အရမ်းသဘောထားကြီး အမြင်ကျယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ ။ ကျနော့်အမေလို မိန်းမတစ်ယောက်ကို ယူထားမှာတော့ ကြုံလာသမျှကို ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ခံနိုင်အောင် လုပ်ထားရတာပေါ့ဗျာ။
(မေးသူ ) ။ ။ ဘယ်လိုပုံနဲ့ ပျော့ပြောင်းတာကို ပြောတာလဲဗျ ။
( ကင်မ် ) ။ ။ ပြောရရင်တော့ အမေလုပ်နေတာတွေကို ဆက်လုပ်နိုင်အောင် ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးပေါ့ဗျာ ။ အမေ့ကိုလည်း အားပေးရင်း ကျနော်တို့ညီအစ်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရင်းပေါ့ ။ တချိန်တည်းမှာ သူ့ရဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း မပျက်မကွက် လုပ်ရင်းပေါ့ ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ သူလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာ ။
( Karma phunchu မိုက်ကယ့်တပည့် ) ။ ။ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှာ မိုက်ကယ်က ကျနော့်ကို ပြောတယ် ။ ငါ့ကိုလာကူပါဦးကွာ ၊ ငါတော့ နေမကောင်း ဖြစ်နေပြီ တဲ့ ။
( Peter မိုက်ကယ့်သူငယ်ချင်း ) ။ ။ မိုက်ကယ်က ကျနော့်ကို ခေါ်ပြောတယ် ။ ငါ့မှာ သတင်း နှစ်ခု ပြောစရာရှိတယ်ကွာ တဲ့ ။ သတင်းဆိုးကတော့ ငါ့မှာ ကင်ဆာရောဂါ ရနေပြီဆိုတာဘဲ ။ သတင်းကောင်းကတော့ ငါဒီရောဂါကို နိုင်အောင်ကို တိုက်မှာ တဲ့
( Karma phunchu ) ။ ။ မိုက်ကယ်က ဒီရောဂါကို သူကျော်လွှားမှာ ၊ အနိုင်ရမှာလို့ချည်း ကျနော်တို့အားလုံးနဲ့ စုကို တချိန်လုံးပြောနေခဲ့တာပါ ။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလို တကယ်ယုံနေတာလားဆိုတာတော့ ကျနော်လည်း မပြောတတ်ဘူး ။
( Peter ) ။ ။ မိုက်ကယ် ကင်ဆာရောဂါရတာနဲ့ ဒီရောဂါဒီလောက်အပွားမြန်သွားတာဟာ ၁၉၉ဝ နှစ်များတစ်လျှောက်မှာ သူ့ရဲ့ အထီးကျန်ဆန်စွာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းရမှုနဲ့လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဆိုင်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ် ။ ဒေါ်စုအတွက်စဉ်းစားရင်း အိပ်ပျက်ရတဲ့ ညတွေလည်း ပါမှာပေါ့ဗျာ ။
(မေးသူ) ။ ။ ဒေါ်စုနဲ့ မိုက်ကယ် အဲဒီတုန်းက ဘယ်လိုဆက်သွယ်ခဲ့ကြသလဲ ။
(ဒေါ်စု ) ။ ။ ကျမသူနဲ့ အကြိမ်တော်တော်များများ ဖုန်းပြောဖြစ်ပါတယ် ။
(မေးသူ) ။ ။ ဒေါ်စုအိမ်က ဖုန်းနဲ့လား ။
(ဒေါ်စု) ။ ။ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျမအိမ်က ဖုန်းက အဖြတ်ခံထားရတယ်လေ။ သူငယ်ချင်းတွေအိမ်ကို သွားပြီး ဆက်တာပါ ။
( ( Robert Gordon မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ် ၁၉၉၅-၂၀၀ဝ ) ။ ။ ဒေါ်စုကျနော်တို့ဆီကို ရောက်လာလေ့ရှိတယ် ။ သံရုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျနော်တို့အိမ်ကို လာတာပါ ။ ပြီးတော့ မိုက်ကယ်နဲ့ ဖုန်းပြောကြတယ် ။ တခါတလေတော့လည်း ကျနော်နဲ့ ကျနော့်အမျိုးသမီးက သူ့ကို နှစ်သိမ့်ရတာ ၊ အားပေးရတာတွေ ရှိတာပေါ့ဗျာ ။
( Karma မိုက်ကယ့်တပည့်) ။ ။ ကျနော် လုံးဝမှတ်မိနေတာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ ။ မိုက်ကယ်က ကျနော့်ကို ပြောတယ် ၊ Karma ရေ …ငါတို့ လုပ်နိုင်တာတစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်ကွာ ၊ ရှိကို ရှိရမယ် တဲ့ ။ ( မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီး ဇနီးသည်နှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့ဖို့ ကြိုးစားစဉ် ဗီဇာအကြိမ်ကြိမ် ငြင်းပယ်ခံရတာကို ရည်ညွှန်းပြောသောစကား )
(Karma phunchu ) ။ ။ သူ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ မိုက်ကယ်က ပြောတယ် …Karma ရေ ..စုကို ပြောလိုက်ပါကွာ ….တို့တွေ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် တဲ့ ။
( ဒါရိုက်တာ မိုးသူ ) ။ ။ ကျနော်ထောင်ထဲရောက်နေတုန်း ကျနော့်မိန်းမဆုံးကြောင်း အကြောင်းကြားလာတယ် ။ ဒေါ်စုလည်း အသုဘကို ရောက်နေတယ်တဲ့ ။ ဒီလိုနဲ့ ကျတော်လည်း ရေဝေးကို လိုက်သွားတယ် ။ ကျနော်မိန်းမအလောင်းနားမှာ ကျနော်ရော ဒေါ်စုရော ရှိတုန်း ဒေါ်စု ပြောလိုက်တာ တစ်ခုက ကျနော့်ရင်ကို အတော်ထိခိုက်သွားစေတယ်ဗျာ ။ သူက ” ဆရာ….ဆရာရော ကျမရော ခင်ပွန်းကောင်း ၊ ဇနီးကောင်းတွေ မဟုတ်ကြဘူးနော် ” တဲ့ ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျနော့်မိန်းမဆုံးတော့ ကျနော်က ထောင်ထဲမှာ ။ မိုက်ကယ်ဆုံးတုန်းကလည်း သူ မသွားလိုက်ဘူးလေ ။ သူက ဆက်ပြောသေးတယ် ….” ကျမက မိခင်ကောင်းတောင် မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ် ။ ကျမသားအခု ဆေးလိပ်သောက်တတ်နေပြီလေ ” တဲ့ ။ သူ့မှာ သူ့သားတွေကို စောင့်ရှောက်ခွင့်မှ မရခဲ့တာကိုးဗျာ ။
( Christopher ဒေါ်စုတို့ မိသားစုမိတ်ဆွေ ) ။ ။ စုကို အားပေးဖို့ ကျနော် မြန်မာပြည်ကို အရမ်းပြန်လာချင်ခဲ့တယ် ။ စုဟာ မိုက်ကယ်ဆုံးသွားတော့ သူ့ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု လုံးဝပြီးဆုံးသွားခဲ့သလို ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ် ။ အနာဂတ်ကိုဘဲ တွေးတော့မယ် ၊ ငါ့နိုင်ငံအတွက်ဘဲ လုံးဝကို အာရုံနှစ်လိုက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ ။
(ကင်မ် ) ။ ။ အမေဟာ တကယ့်ကို စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်သူလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ် ။ တစ်ခုခုဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းစရာရှိနေရင်တောင်မှ သူ့ဘဝကိုသူ ဆက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတာသိတယ် ။ အဲဒါကို တွေးပြီး အချိန်ကုန်ခံငိုနေတတ်တဲ့သူမျိုး မဟုတ်ဘူး ။
(ဦးတင်ဦး) ။ ။ ကျနော်တို့အခုလုပ်နေတာတွေက ကျနော်တို့ဘာသာ တွက်ချက်ပြီး စွန့်စားလုပ်နေကြတာပါ ။ သတိထားတဲ့ အကောင်းမြင်မှုတော့ ရှိရသေးတာပေါ့လေ ။ ဒေါ်စုက သမ္မတကြီးကို ယုံတယ်လို့ ပြောတော့ လူတွေက မေးကြတယ် ….ဒါဆိုရင် အစိုးရကိုရော တဲ့ ။ အဲဒါကို ဒေါ်စုက ဘာမှ ပြန်မဖြေထားဘူး ။ ဒီတော့ ဆိုလိုတာက ကျနော်တို့မှာ ဒီအစိုးရနဲ့ တွဲလုပ်လို့ ရလားမရဘူးလားဆိုတဲ့ ပြသာနာက ရှိနေသေးတယ် ။ အဲဒါက ပြသာနာအဖြစ် ရှိနေသေးတယ် ။
( ဟီလာရီ ကလင်တန် ) ။ ။ သူမဟာ အခု စွန့်စားမှုတရပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက တကယ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိသလားဆိုတာကို သိဖို့နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အားပေးဖို့ ဒီလို လုပ်မှလည်း ဖြစ်မယ်လေ ။ ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဘာလဲဆိုတာလည်း သူသိပါတယ် ။ နောက်ရွေးချယ်မှုဆိုတာကတော့ အခြေအနေတွေ အရင်အတိုင်းဘဲ ပြန်ဖြစ်သွားရုံပေါ့ ….အနားယူသွားတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနေရာမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခု ဝင်လာမယ် ။ ၊ တိုင်းပြည်ပွင့်လင်းတိုးတက်လာတာလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ၊ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အနာဂတ်ကို သွားဖို့ လမ်းလည်း ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး …….ဒါတွေကို သူလုံးဝ နားလည်ပါတယ် ။
( သတင်းထောက် ) ။ ။ စစ်တပ်က ဆက်ပြီး လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ လုပ်နေတယ်နော် ။ ကလေးစစ်သားတွေသုံးတာမျိုး ၊ အလိုမတူဘဲ ကလေးတွေကို ခေါ်သွားမျိုး ၊ မုဒိန်းကျင့်တာကို စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့ သုံးတာမျိုးတွေ ရှိနေသေးတယ် ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ကို ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဘယ်လိုအလျော့ပေးစေ့စပ်တာမျိုးတွေ လုပ်ရမလဲ ။ တစ်ချိန်ထဲမှာဘဲ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိစ္စတွေကိုလည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရဦးမယ်မဟုတ်လား ။
(ဒေါ်စု) ။ ။ စစ်တပ်အနေနဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်လည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ် ။ ဒီတိုင်းပြည်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဟာ သူတို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် …အခု ရှင်ပြောတဲ့ လူ့အခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေလည်း ဆက်ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါတွေက ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စနစ်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ မရှိသေးလို့ပါဘဲ ။ ကျမတို့တွေ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်အောင် စစ်တပ်ကို ကျမတို့ စည်းရုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
( ဟီလာရီ ) ။ ။ နယ်ဆင်မင်ဒဲလားက ဘာကြောင့် အာဏာရှင် ဒီကလပ်ခ်ကို ယုံကြည်မှု ပေးခဲ့တာလဲ ။ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ဖို့ ဆိုပြီး ဘာကြောင့် မင်ဒဲလားက ဒီကလပ်ခ်နဲ့ ပူပေါင်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ ။ ဒီကလပ်ခ် ဆိုတာ လူမဲတွေကို ဖိနှိပ်ငြှင်းပန်းခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ဘဲလေ ။ ဒါတွေဟာ တွေးခေါ်ခံစားပြီး လုပ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေဘဲ ။ ဒါလို ကိစ္စမျိုးအတွက် သိပ္ပံနည်းကျတဲ့တွက်လို့ရတဲ့ ပုံစံဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အတွက်ကတော့ ဒီကိစ္စဟာ မသေချာပေမယ့် အန္တရာယ်များနိုင်ပေမယ့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ရဲ့လားဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာဘဲ ။ လုပ်သင့်လို့ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ ကျမယူဆတယ် ။ ဒီအတွက် ကျမဘက်ကတော့ သူ့ကို ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ပံ့ပိုးမှု မှန်သမျှကို ပေးမှာဘဲ ။
( ဒေါ်စု ) ။ ။ ကျမနဲ့ ကျမမိသားစု လုံးဝကွဲသွားခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ ကျမ အကျယ်ချုပ်ကျသွားတဲ့ အချိန်ပါဘဲ ။ ကျမတို့ မိသားစုရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အတော်လေးတော့ ပြောင်းလဲသွားတော့မယ်ဆိုတာ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမလည်း သိလိုက်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ ဆက်သွယ်လို့ မရတော့ဘူးလေ ။
ကျမအကျယ်ချုပ်ကျပြီး ပထမဆုံး ခရစ်စမတ်မှာ မိုက်ကယ်ကို လာခွင့်ပြုခဲ့ကြတယ် ။ ကလေးတွေကတော့ လာခွင့်မရခဲ့ပါဘူး ။
ဘဝမှာ မိသားစုနဲ့ အတူတူ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေ ရှိတယ်လေ ။ သူတို့မပါဘဲဆိုတာ လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး ။ မိသားစုဆိုရာ တန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာပါ ။ မိသားစုကွဲတယ်ဆိုတာ မကောင်းပါဘူး ။ ဘယ်တော့မှ မကောင်းပါဘူး ………….။
— with Mee Hlan and2others.
(face book ပေါ်တွင် တွေ့ မိသောကြောင့် ပြန် share ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Spring Flowers မှ ခွင့်ပြုမည်ဟုလည်း မျှော်လင့်ပါသည်)
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် စီဂျေကထူးဆန်းရေ။ :hee:
နောက်တစ်ပတ် ဆန်းဒေး (၂၄-၃-၁၃) မှာ HBO က The Lady လွှင့်မှာနော်.. မနေ့က ကြော်ငြာ တွေ့လိုက်လို့ ပြောပြတာ
HBO က မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင် ကြည့်လို့ ရတာလား။
အဲဒီနေ့ ပိတ်မထားရင်တော့ အံ့ဩစရာဘဲ။
နေပူတော်က ကေဘယ်လိုင်းထဲ ထိုင်းစာတမ်းထိုးတွေနဲ့ လာနေတာပါပဲဗျ
ရှဲ့ရှဲ့ သိုင်းကျူး အကြီးကြီးပါ။
The Lady ကြည့်ရတုံးက (ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာလိုမျိုး၊ဒေါ်စုရဲ့ သမိုင်းဝင်ရွှေတိဂုံမိန့်ခွန်းမျိုး) ဘဝင်မကျမိတာလေးတွေ ခုမှပဲ စိတ်တိုင်းကျတော့တယ်။
အဲဒီ documentary ကို ဘီဘီစီ ကနေ ကြည့်လိုက်ရတယ်။
တော်ရုံ မိန်းမ မလုပ်နိုင်တာ/ မလုပ်ရဲ တာ ကို တိုင်းပြည်အတွက် သူ အနစ်နာခံခဲ့တာပါ။
သူ့ သားတွေ နဲ့ ယောကျာင်္းကို အရမ်းချစ်တာ သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ အားလုံးသိပါတယ်။
အဖေ့သမီး မှာ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ အဖေ့သွေးတွေ နဲ့ ရဲရဲတောက် နေတာလဲ မဆန်းပါဘူးလေ။
ဒီလို မြန်မာပြန် ကို မဖတ်ဖူးဘူး။
မျှဝေတာလေး အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်။
မနေ့ညက ဘိုလို ဆပ္ပတိုက်တယ်လ်နဲ့ ကျိလိုက်ရသဗျို့ ..
အတော်လေးကို အနစ်နာခံခဲ့ကြ စွန့်လွှတ်နိုင်ကြတဲ့ မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကထူးဆန်းရေ ။
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆိုတာက ဘာမှအရေးမကြီးဘူး
ကင်မရာတွေရှေ ့မှာ ဒရာမာလုပ်ပြဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့၊ ရိုးသားတဲ့၊ ရဲရင့်တဲ့
ဒီမိုကရေစီ ရှေ ့ခရီးအတွက်
မှောက်ချည် လှန်ချည်နဲ့ လိုရာရောက်အောင်
စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး နှစ်ဘက်စလုံးထူးချွန်တဲ့
ကမာ္ဘ့ခေါင်မိုးပေါ်က မိုးသီးဇွန် ရှိတယ်။
နိုင်အောင် နဲ့ ခင်ဥမ္မာ တို့ လင်မယား အပြူးလိုက်ရှိတယ်။
သူရိန်ကျော်ဇော (ခေါ်) ဝတုတ် တယောက်လုံးရှိတယ်။
ထစ်ကနဲဆို လမ်းပေါ်မှာ အော်ပြီးသားဆိုတဲ့
ငါတို့အပေါ် မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ချစ်ပြတတ်တဲ့
မွှန်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အိညက်အိညက်နဲ့ အမှောင်ခွင်းမယ့်
ဖေ့စ်ဘုတ်ချိုတူးဇော် (ရဲရဲတောက် ယူအက်စ်အေ) ရှိတယ်။
လိုအပ်လာရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုပါ ကလော်ဆဲမယ့်
ပြည်သူတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လမ်းမှန်ညွှန်ပြတည့်မတ်မယ့်
လူပုံနဲ့ လုပ်ရပ်က မနှဲလေးနဲ့တူပေမယ့်လဲ
၄ရ ထဲက ရိုင်းခဲ့တဲ့သမိုင်း
ရှေ ့ဆက်ပြီးလဲ ရိုင်းပါစေတော့။
(ဤကဗျာလိုလိုစာလိုလို စာစုတွင် မပါဝင်လိုက်ရဘဲ ကြွင်းကျန်ရစ်သော မြန်မာလူထုကြီး အားကိုးအားထားပြုနိုင်ရာ အမည်ရှင်များ သီးခံခွင့်လွှတ်ကြပါလေကုန်။)
စန်ဒရာ မှ ဘလော့တွင် ပေးသော Comment ကို ထပ်ဆင့်ဖော်ပြသည်။